XSK Kolayga oo magcaabay macalimiinta xulalka qaranka K Kolayga dalka. Wareegto ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubada kolayga ayaa waxaa lagu magacaabay macalimiinta qaybaha kale gedisan ee xulka qarankan kubbadda Kolayga Soomaaliyeed.
Guddoomiye Caddaani oo Faarax Oday u magacaabay madaxa xulalka qaranka K Kolayga.
Petr Cech oo u wareegay Arsenal. Goolhayihii kooxda Chelsea Petr Cech ayaa u wareegay kooxda Arsenal ee waqooyiga London 11 sanadood ka dib markii uu kooxda Rennes ee reer France uga soo baqoolay kooxda Chelsea.
Guddoomiyihii Xiriirka Cayaaraha Fudud ee Soomaaliya oo geeriyooday. Tacsi
Inaa Lilaahi Wa Inaa Ilayhi Raajicuun. Alaha naxariistiisa janno ha siiyee waxaa maanta dalka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday guddoomiyihii Xiriirka Soomaaliyeed ee Cayaaraha Fudud Prof Maxamed Cali kaasoo wax badan ka soo qabtay horumarinta cayaaraha Soomaaliyeed.
Ocean Stars Oo Muqdisho Kawada Tababarkii Ugu Adkaa Iyagoo Ka Qeyb Galaya Tartamo Kala Duwan
Waxaa si xiiso leh uga biloowday magaalada Muqdisho tababaro la siinayo labo xul kuwaas oo Soomaaliya ku matali doono tartamo kala duwan oo kubbadda cagta ah, waxana ay isugu jiraan xulal ay da’dooda ka hooseyso 17-ka sanno iyo 20-ka sanno.
Kooxda Heegan oo bilaawday udiyaar garowga tartanka kooxaha Bariga iyo Bartamaha Africa
Waxaa si wayn waqtigaan magaalada Muqdisho uga soconaya diyaar garoow xoogan oo ay ku jiraan Macalimiinta Ciyaartoyda iyo Maamulka kooxda Heegan kuwaas oo isku diyaarinaya ka qayb galka tartanka kooxaha Bariga iyo Bartamaha Africa oo aan wali si rasmi ah loo shaacin halka lagu qaban doono.
Manchester United oo 31 Milyan kula soo wareegtay Memphis Depay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa adduun gaaraya 31 Milyan oo geniga Isterliinka ah una dhiganta 48 Milyan oo dollar ku soo afjartay kulana soo wareegtay gooldhaliyaha da'da yar ee xulka Nederland iyo koocda PSV Eindhoven Memphis Depay.
Page 10 of 16First Previous 5 6 7 8 9  11 12 13 14 Next Last Search Articles...